Alaabooyin cusub oo Apple ah ayaa yimid, ma waxaad iibinaysaa waxa aad hadda haysato? | Waxaan ka socdaa mac
Laba maalmood gudahood ayaa dufcadda xigta ee wax soo saarka Apple ay bulshada dhexdeeda ku iman doontaa, dufcad loogu talo galay waxa lagu xamanayo ayaa keenaysa cusub iPhone 7 iyo 7 Plus, Apple Watch cusub iyo yaa garanaya haddii noocyada cusub ee MacBook. Iyada oo daadadka noocaas ahi yihiin, Barta internetka ee iibka alaabada Waxay buuxinayaan xulashooyin laga yaabo inaad xiisayso.
Hadda, Maxaad maskaxda ku haysaa markaad iibsaneyso wax soo saarka Apple? Maxaad samayn lahayd haddii aad tahay qofka iibinaya alaabtaada Apple? Maqaalkan waxaan in yar kula hadlayaa, anigoo ku salaynaya khibrada aan u leeyahay, waxa ay tahay inaad tixgeliso kiisaskan.
Mar kasta oo Apple ay qabato Muhiim, taageerayaasha haysta alaabooyin ay haystaan ​​oo raba inay iibsadaan kuwa cusub ayaa go'aansada inay u dhigaan iibkooda. Si kastaba ha noqotee had iyo jeer ma dhigaan ama uma hayaan sidii ay ahayd markaa qof kale ayaa iibsan kara.
Ku saabsan dammaanadda alaabada Apple Waa inaan ogaano marka aan iibsano badeecada Apple damaanadkeedu inuu bilaabmayo, marka lacala hadii ay bilaabato inay si qalad ah u shaqeyso, waxa kaliya ee aan sameyno waa inaan u geyno adeeg farsamo oo idman ama Apple Store halkaas oo, tirada taxanaha ah, way xaqiijin doonaan haddii ay ku jirto muddada damaanadda iyo in kale. Yeynaan ku mashquulin rabitaan qaansheegad ah alaab gacan labaad oo Apple ah.
Ku saabsan dayactirka qalabka Waxaan kuu sheegi karnaa in waxa ugu horeeya ee ay tahay inaad fiiriso ay tahay inaysan lahayn kuuskuusyo badan maxaa yeelay kuusaskaasi waxay sababi karaan dhibaatooyin gudaha ah oo aadan arkeynin waqtiga iibsiga. Marwalba waxaan raadsadaa qalab xaaladoodu kufilantahay mana weydiisto wax kabadan inta aan aniga qudhaydu kubixinayo alaabada Apple ee aan iibiyo.
Ku saabsan amniga qufulka qalabka Waxaan kuu sheegi karnaa haddii aad go'aansato inaad iibsato iPhone ama iPad, mid ka mid ah waxyaabaha ay tahay inaad tixgeliso waa in kal-fadhigii Apple ID uu ku xirmay waana taas haddii qalabka uu ku xiran yahay aqoonsi Apple markii aad soo celiso ayaa lagaa tagi doonaa warqad miisaanka fiican leh. Haddii aad la kulanto qof ku iibin doona aalad macruufka ah oo dib ugu soo celiyey warshadda, dhex mar hannaanka hawlgelinta aaladda illaa ay ka gaarto meesha ay ku weydiineyso aqoonsigaaga Apple, si markaa ay dhacdo inuu xiriir la leeyahay Aqoonsi ka duwan Apple waxaad isla iibsan kartaa iibiyaha.
Haddii ay dhacdo inaad iibsaneyso Apple Watch Waa inaad xisaabta ku darsataa inay ka go'day iPhone iibiyaha iyo in qufulka furaha la xiray. Waxaas oo dhan waa inaad haysataa iPhone-kaaga oo diyaar u ah inuu kugula xiriiro iPhone-kaaga hor iibiyaha haddii ay dhacdo inaad bixiso wax macluumaad ah.
Hadda waa inaan sugnaa Apple inay soo bandhigaan qalabkooda cusub oo aan eegno inay mudan tahay iibinta kuwa aan haysanno iyo in kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Alaabooyin cusub oo Apple ah ayaa yimid, ma waxaad iibinaysaa waxa aad hadda haysato?